किन बढ्यो मासुको मूल्य ? – BikashNews
२०७८ वैशाख १८ गते ९:३१ जगदीश उपाध्याय
अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्यले आकाश छोएको छ । एक दुई महिनाको छोटो अवधिमै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य झण्डै दोव्वरले बढेको छ । प्रतिकिलो दुई सय ५० रुपैयाँंमा पाउने मासुको मूल्य बढेर अहिले चार सय ५० प्रतिकिलोको हाराहारीमा पुगेको छ । र यो बढ्ने क्रम अझै जारी पनि छ ।
खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सवैलाई ज्ञात छ मूल्य बढ्नु र घट्नु माग र आपूर्तिसँंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्दछ । माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेपछि मूल्य स्वतः बढ्छ भने माग भन्दा बढी आपूर्ति हुन थालेपछि मूल्य घट्छ । यो सबैलाई सर्वविदितै भएको विषय नै हो ।
प्रत्येक मानिसको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने मासु जस्तो अति आवश्यक खाद्य पदार्थमा यति अचाक्ली मूल्य बृद्धि हुँंदा पनि कसैको ध्यान अझैसम्म तानिएको छैन । न केन्द्र सरकार, न प्रदेश सरकार, न त स्थानीय सरकारको नै ।
किन बढयो मूल्य ?
One comment on "किन बढ्यो मासुको मूल्य ?"
CHOR HARU LIE TO PUT JAIL.
शाओमीले लन्च गर्यो रेडमी १० नोट प्रो, विभिन्न रङ्गमा ३४ हजार रूपैयाँमा पाइने